Ny fitsipiko telo momba ny firazanana, ny fivavahana, ny politika, ny firaisana ara-nofo ary ny bigotry | Martech Zone
Ny fitsipiko telo momba ny firazanana, fivavahana, politika, firaisana ara-nofo ary ny foko lehibe
Asabotsy, Aprily 14, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny vaovao amin'ny Imus ity herinandro ity dia tena niteraka resa-be tamin'ny resaka ary tiako ny mizara ny hevitro amin'ireo namako sy fianakaviako. Amin'ny maha-ray ahy dia mitandrina manokana aho amin'ny fanabeazana ny zanako. Tena marina tokoa fa ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fiheverana tafahoatra dia ampitaina amin'ny zanany.
Ny fitsipiko telo:
Tsy azoko mihitsy. Amin'ny maha-lehilahy ahy dia tsy ho azoko mihitsy hoe manao ahoana ny atao hoe vehivavy. Amin'ny maha fotsy ahy dia tsy ho takatro mihitsy hoe manao ahoana ny hoe vitsy an'isa. Amin'ny maha lehilahy mahitsy ahy dia tsy ho azoko mihitsy hoe manao ahoana ny atao hoe homosexuel. Amin'ny maha-Kristiana ahy dia tsy ho azoko mihitsy hoe inona no atao hoe fivavahana hafa. Nanaiky aho fa tsy ho vitako mihitsy ny mahatakatra izany; noho izany dia miezaka fotsiny aho hanaja ireo izay tsy azoko.
Samy hafa ny tsirairay ary ny tsy fitovizantsika no mampiavaka antsika sy fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tiako ny fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina, ny firazanana, ny fivavahana, ny lahy sy ny vavy, ny harena… ny zava-drehetra momba azy ireo. Angamba izany no iray amin'ireo antony tiako be ny sakafo… ny tsiron'ny kolontsaina samihafa (Indiana, Sinoa, Taiwanese, Italiana, Soul Food, Poloney, Okrainiana… mmm) dia mahagaga. Mitovy ny fitiavako ny mozika… ahita ahy mihaino an'i Notory BIG, ireo Three Tenors, Mudvayne na Babes any Toyland… ary ny zavatra rehetra eo anelanelany. (Na dia tokony hiaiky aza aho fa tsy manam-pitiavana firenena).
Fenitra avo roa heny dia ampahany amin'ny fiainana. Ny tahan'ny hetra miditra, ny isa SAT, ny fiantsonan'ny sembana… manome anarana azy ianao ary misy fenitra roa sosona amin'izany. Ny fari-pitsipika avo roa heny dia tsy zavatra ratsy… samy hafa ny fari-piainan'ny tsirairay tokony mihatra. Naheno sy nahita olona sasany te hampihatra ireo torolàlana mitovy amin'izany aho tamin'ny nandroahana an'i Imus ary nampihatra izany tamin'ny hip-hop na mpanao hatsikana.
RNH, misy elanelam-potoana lehibe eo amin'ny fikendrena ny fanamarihana ara-poko ho an'ny vondron'olona manokana hanao vazivazy na amin'ny ankapobeny momba ny maro. Manaova vazivazy momba ny olona matavy ary mety ho izaho no hihomehy sy hitantara amin'ny olon-kafa ny vazivazy… fa ny manao vazivazy matavy dia midika hoe mandratra ahy ary hafa izany (na dia mety hihomehy aza aho ka hilaza amin'ny olon-kafa). Naheno vazivazy momba ny Conservatives, Liberaly, Jiosy, Kristiana, Mainty, Fotsy, Aziatika, Arabo, sns aho izay mahatsikaiky… manesoeso be ny stereotype iray nefa tsy manaparitaka ilay stereotype amin'ny fomba mandratra.
Ny mahasamihafa azy dia ny handratra na hanampy ny fahazavan-tsika ny tanjona. Indraindray dia resaka fahitana izany, fa izany indrindra no tokony ho fantatsika. Tsy misy tsipika amin'ny fasika. Misy zavatra mety mampihomehy olona iray ary mandratra ny manaraka.
Izany dia nilaza hoe, "Efa nandia ny tsipika ve aho?". Eny, tanteraka… ary nanenina avy hatrany aho ary nanenina tamin'izay. Tsy mino aho fa be olona be, saingy tanora sy tsy mahalala ny hafa. Ireto fitsipika telo ireto no niasa mba hanome lohako bebe kokoa ny zanako noho izaho.
Raha nianatra namantatra ny fahasamihafantsika sy hanaja azy ireo ny olona dia mahatsapa aho fa ity tontolo ity dia ho toerana mora honenana kokoa.
Misaotra an'i JD nanentana ahy hanoratra ity.
Loka momba ny safidy blogging
Apr 14, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Ny hevitrao voalohany dia zavatra tiako ho azon'ny rehetra. Ny fomba tsara indrindra ahazoana fahatakarana vondron'olona, ​​fivavahana na zavatra hafa noho ianao dia mitazona saina malalaka, manaja ny zavatra inoan'izy ireo ary tsy manery ny fombao hanaraka azy ireo. Lahatsoratra tsara.
Tokony hankalaza ny tsy fitovian-kevitra isika. Betsaka ny zavatra tokony hatolontsika. Ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo zavatra manokatra maso indrindra tokony hatao. Tamin'ny naha Amerikanina ahy dia tohina aho rehefa nitety firenena samy hafa ary nahita fa mandroso ny ankamaroan'ny tany. Manana fihetsika isika fa ny USA dia iray ihany, saingy misy zavatra maro hafa hita. Toy izany koa ny sakafo sy ny hazakazaka. Betsaka ny tsara. Ankafiziko ny miresaka amin'ireo mpanavakavaka ary mahafantatra azy ireo. Mampifandray olona tsy dia itovizako firy aho. Ny adihevitra fanajana dia tsara, ny fankahalana tsy. Asa tsara Doug
Betsaka ny olona manaraka ny toe-javatra Imus no manofahofa ny sainan'ny fahalalahana miteny, milaza fa tsy amerikanina ny nitifiany.
Heveriko fa matetika loatra dia hadinontsika fa voaaro ny kabarin'i Imus. Tsy esorina ny rantsam-batany, na mipetraka ao amin'ny tranomaizina noho ny zavatra noteneniny. Izay ihany ny lalàmpanorenana omena.
Misy fahasamihafana eo amin'ny lahateny voaaro sy ny vokadratsin'ny fitenenana zavatra tsy malaza amin'ny alàlan'ny kabary arovana.
Tsy misy olona tokony hampiasa Imus raha tsy tiany. Tsy misy mila miresaka aminy, mihaino azy, na zavatra hafa. Mandoa ny vokany (ara-drariny na tsia) izy amin'ny fanamarihana nataony tamin'ny fampiasana ny kabariny voaaro.
Apr 15, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Tena idealista tokoa ianao Andriamatoa Karr. Milaza aho fa mifikitra amin'izay mahasoa anao. Ireo no karazana arkanisma "Kumbaya" tsy an-kijanona izay horesahiko, ary inona no omeko ny ankamaroan'ny olantsika eo amin'ny fiaraha-monina.
Taratasy misokatra ho an'i Andriamatoa Karr
Apr 15, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Mamporisika ny mpamaky rehetra aho hanaraka ny rohy mankany amin'ny lahatsoratr'i ET Cook hamaky ny valinteniko. Lohahevitra tokony horesahina, azo antoka izany. Io no karazana lohahevitra tian'ireo rehetra ialana amin'izao fotoana izao.
Ny fahanginana dia mandratra antsika - mila miresaka bebe kokoa momba izany isika.
Misaotra anao noho ny valiny feno fanajana Andriamatoa Karr. Namaly tamim-pitiavana ny hevitrao aho.